Vaovao - Infinitus Plaza
Guangzhou Infinitus Plaza dia miorina ao Baiyun New Town, Distrikan'i Baiyun, tanànan'i Guangzhou, faritanin'i Guangdong. Ny mpanao mari-trano malaza sy malaza eran-tany no namorona azy, izay fantatra amin'ny anarana hoe "Queen of curves" --- Zaha Hadid.
Ny Infinitus Plaza dia mampifandray ireo faritra roa amin'ny endrika andiana "peratra tsy manam-petra", toy ny "∞", manodidina ny zaridaina afovoany izy io mba hamorona faritra fifandraisana malalaka ary mampiditra hazavana voajanahary maro ao anaty, izay tsara ho an'ny tontolo iainana, fitsitsiana angovo ary akaiky ny natiora.
Ny takelaka vita amin'ny rindrina vita amin'ny takela-by rehetra ho an'ny Infinitus Plaza dia atolotry ny orinasanay --- Orinasa fananganana Yingjiwei. Ny firaka aliminioma ho an'ny plaza dia 3003 H24 sy 5083. indrindra mba hamehezana ny kalitaon'ny tontonana dia angatahina ny hatevin'ny facade hampiasa takelaka avo lenta 4.0mm sy 5.0mm aluminium. Ny fitsaboana an-tampon'ny fantsona multicolor an'ny PVDF ho an'ny takelaka rehetra dia manakana ny tsy fisian'ny orana asidra, ny hatsiaka sy ny toetr'andro mafana ary hiantohana ny vokatra maharitra sy hitazomana tsara.
Ny novelony, ny famoronana endrika ary ny fifehezana ny kalitao henjana dia mampitombo ny fahasarotana amin'ny fikirakirana ny takelaka aliminioma, saingy nifikitra tamin'ny fihetsika, fikarohana ary miasa mafy hatrany, dia amboarinay tsirairay ireo olana ireo. Mba hampisehoana ny fahaizantsika mamokatra, ny fanamafisana ny kalitao ary ny fahatsoram-po amin'ny mpanjifa, dia manasaraka ny tsipika famokarana vaovao ho an'ity tetikasa ity aza izahay. Serivisy ho an'ny mpanjifa manokana, tsipika famokarana tsy miankina, ekipa valin-kafatra haingana amin'ny famolavolana, ny famokarana ary ny olan'ny fametrahana eo amin'ny tranokala, izay deraina sy eken'ny ekipan'ny Zaha Design Institute sy ny mpanjifa avokoa.
Ny tetikasa Guangzhou Infinitus Plaza dia efa ho vita, io dia ho lasa mari-pamantarana vaovao an'i Guangzhou ary iray amin'ireo tetikasa miavaka eran'izao tontolo izao.
Raha ny momba ny orinasan-tsika dia vonona izahay hiatrika fanamby vaovao amin'ny tetikasa rehetra, tsy handresy anay ny fahasarotana, fa hanampy anay hatanjaka sy hatanjaka kokoa. Izay misy finiavana dia any Yingjiwei.
Fotoana fandefasana: Mar-24-2021